जनता ठग्न बजाज ‘आरई’ हेटौंडामा !
ARCHIVE, AUTO, COVER STORY, OFF THE BEAT » जनता ठग्न बजाज ‘आरई’ हेटौंडामा !
काठमाडौं- प्रचलित ऐन विपरित मोटरसाइकलमा कालोबजारी गरेर जनता ठग्न पल्किएको कम्पनी हंसराज हुलासचन्दले नयाँ शोरुम होराईजन अटो प्रालि हेटौंडामा स्थापना गरेको छ । नयाँ शोरुमले बजाज आर्रईका स्पेयर पार्टस तथा एसेसरिजका लागि सहजता प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
मोटरसाइकल बेच्दा होस् वा मोटरसाइकलका पाठपूर्जा बेच्दा होस्, जनतालाई लुट्ने गरेको कम्पनीले आफ्ना ग्राहककालागि जहाँसुकै छिटो र सर्व सुलभ सेवा दिदै आएको दावी गर्दै आएको छ । तर कम्पनीले महँगो मा पाठपूर्जा बेच्ने, मोटरसाइकल बेच्दा नै ठग्ने लगायतका कर्तुतहरु अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो ।
यता एचएचबजार आरईका डेपुटी जनरल म्यानेजर योगेन गुरुङले हेटौंडामा नयाँ शोरुम शाखा स्थापना भएको घोषणा गर्न पाउँदा निकै हर्षित भएको वताएका छन् । उपभोक्ताको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सोरुम विस्तार भएको कम्पनीको दावी छ । नयाँ शाखा बिस्तारको अवसर पारेर सोरुमले ग्राहकलाई विभिन्न किसिमका पुरस्कार पनि घोषणा गरेको छ । यता जनतालाई ठगी गरेर प्रचलित ऐन विपरित कालोबजारी गरी मोटरसाइकल बेच्ने गरेको कम्पनीले पुरस्कारबाट लोभ्याएर जनता लुट्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
Tags : ARCHIVE, AUTO, COVER STORY, OFF THE BEAT